Faahfaahin dheeriya oo ka soo baxaysa Qarixii ka dhacay Baladwayne. – Hornafrik Media Network
Qarax ismiidaamin ah ayaa ka dhacay magaalada Beledweyn ee Gobolka Hiiraan, iyadoo qaraxan uu geystay qof jaakadaha qarxa xirnaa oo isku qarxiyay afaafka hore ee xarunta maamulka Gobolka Hiiraan.
Qaraxan ayaa dadka ku waxyeeloobay waxaa ka mid ah Wariyayaal ay ka mid yihiin, C/shakuur Maxamad oo u shaqaynayay Star FM, C/qaadir Cumar Ibraahim-RTN, C/laahi Cismaan Macalin-Jubbaland TV iyo dad kaloo shacab ah.
Guddoomiyaha Gobolka Hiiraan Cumar Aadan Ibraahim baadiyow ayaa sheegay in qaraxa ay ku dhinteen labo ruux oo shacab ah, iyo qofkii is qarxiyay.
Isbitaalka magaalada Beledweyn ayaa waxaa la dhigay dhaawacyada illaa 15 ruux, kuwaasoo qaarkood dhaawacyadooda ay culus yihiin.
Al-Shabaab ayaa sheegatay mas’uuliyada qaraxa ismiidaaminta ee ka dhacay afaafka hore ee xarunta Gobolka Hiiraan, waxaana ay ku tilmaamtay inay ku bartilmaameedsadeen saraakiil ka tirsan Sirdoonka Maamulka gobolka.